कतै यी वास्तुशास्त्र नमिलेका कारण तपाईका जीवनमा समस्याहरु आइरहेका त छैनन् ! - IAUA
कतै यी वास्तुशास्त्र नमिलेका कारण तपाईका जीवनमा समस्याहरु आइरहेका त छैनन् !
ramkrishna September 29, 2017	कतै यी वास्तुशास्त्र नमिलेका कारण तपाईका जीवनमा समस्याहरु आइरहेका त छैनन् !
भागदौडले भरिएको जीवनमा बाचिरहेका मानिसले धेरै कुरामा ध्यान दिन सकिरहेको हुँदैन । यसका कारण उसको जीवनमा धेरैभन्दा धेरै जटिल समस्याहरु आइनै रहन्छन् । चाहे त्यो जीवन साथीसँगको सम्बन्धमा नै किन नहोस् ।
Previous Previous post: वास्तुशास्त्र भन्छ : यस्तो समयमा गरेको कामले शुभ फल दिन्छ
Next Next post: वास्तु अनुसार तपाईंको घर कस्तो हुनुपर्छ ?